I-Exclusive Estate, Gated, Oceanfront Retreat - 2
Hakalau, Hawaii, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Chad
I-Hale Laule'a - I-Multi-Million Dollar Gated Estate
• I-Green and Net Zero Estate
• Ubuncane bobusuku obungu-3, Ngesaphulelo Seviki Nenyanga
• I-Oceanfront, indawo eseceleni yewa
• Ifulethi langasese le-630sf - Umbhede ongu-1, ikhishi, igumbi lokuhlala elinesofa lokudonsa, ideski, igumbi lokugezela eliwubukhazikhazi kanye nengadi yolwandle.
• Indawo yokupaka, ama-TV, i-Wi-Fi, i-A/C, ilondolo
• Ukufinyelela kwi-Swimming Pool
• Eminye imisebenzi, ukuqeqeshwa kwe-scuba dive, ukwelashwa kwe-equine, ukuvakasha kwesiqhingi, isevisi ye-butler, imishado, ukuqeqeshwa kwempilo
•Azikho Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12
Aloha futhi wamukelekile epharadesi lethu lokugcina. I-Hale Laule'a iyindawo yangasese, engamahektha angu-5, enjengezindawo zokungcebeleka, ebiza izigidi eziningi yaqedwa ngoMashi 2019. Indawo yethu iyamangalisa futhi iwumsebenzi wobuciko okhethekile, osezingeni eliphezulu, owakhiwe ngokwezifiso zikakhonkolo kanye nomklamo wamapulangwe asindayo. Idizayinelwe ukuthi ibe i-net-zero estate, i-Hale Laule'a yenziwe ngezinto ezigaywe kabusha nezisimeme, izenzela owayo ugesi namanzi, futhi isebenzela ukutshala ukudla kwayo esizeni. Le ndawo ihlanganisa indlu enkulu, i-Hale Laule’a, ene-lanai engemuva nedamu; I-Carriage House enefulethi kanye nenqolobane; insimu encane yezithelo; indawo encane yezilwane; izindawo zokusetshenziswa okuningi; kanye nezingadi eziningi kuhlanganise nengadi engezansi olwandle.
Indawo yokuqasha yiSolar Suite, ifulethi elihlukile, elizimele eliseduze ne-Main house. I-Solar Suite iyistudiyo, ifulethi elinamagumbi ama-2 elinendawo yalo yokupaka, indawo yokungena kanye negceke. Iqedwe ngoJuni 2020, lesi sikhala sicishe sibe ngu-630sf futhi sinegumbi lokulala lesitudiyo elinombhede osayizi wendlovukazi, itafula lokudlela langokwezifiso elinezihlalo ezi-4, ideski, khipha usofa netafula lekhofi. Igumbi lesibili yikhishi elinezibuko, izitsha, nezinto zesiliva. Ukupheka akuyona inkinga, njengoba kunendawo yokupheka yokungeniswa, i-microwave engusayizi ogcwele, ihhavini lesicabha saseDutch, isiqandisi esinomshini weqhwa, ibhodwe lekhofi kanye ne-blender. Kukhona ikhabethe elikhulu langokwezifiso. Igumbi lokugezela likanokusho linendlu yangasese ye-bidet, futhi kukhona ngisho nokubuka kolwandle kusuka eshaweni yemvula. Amafasitela neminyango konke kunezikrini ukuze ujabulele umoya ohelezayo nemisindo yamagagasi. Leli fulethi liqhudelana kahle kakhulu kunoma yiliphi ihhotela eliwubukhazikhazi ongalicabanga, elinayo yonke ifenisha, iminyango namafasitela ngokwezifiso ezenziwe nge-teak, imishayo edaluliwe ophahleni, kanye nemininingwane ekhethekile yomakhi kulo lonke. Ukubuka kwakho kwe-panoramic akuvimbekile, noLwandlekazi i-Pacific ibanga nje ukuphonsa itshe ukusuka eminyango yakho ephindwe kabili yama-french nasengadini yangasese. Ifulethi liseduze ne-lanai engemuva yendlu enkulu kanye nedamu lokubhukuda. Izivakashi zisebenzisa ngokugcwele ichibi lendlu enkulu kanye nendawo yangemuva ye-lanai, nazo zonke izindawo zasengadini. Indawo yokuwasha iyatholakala ukuze isetshenziswe izivakashi. Ukuhlala kwamasonto onke nanyanga zonke kuncishisiwe futhi kufaka phakathi ukuhlanzwa kwamasonto onke kanye nenkonzo yelineni.
Ngenkathi uhlala e-Solar Suite, usuku olujwayelekile luzoqala ngokuphuza inkomishi yekhofi noma itiye ubukele ukuphuma kwelanga okuhle kakhulu oLwandlekazini i-Pacific kusukela embhedeni wakho, engadini engezansi, noma indawo yokubhukuda yase-Hale Laule'a. Ngemva kwekhofi, hamba uhambo lwamamayela angu-2 nokubuya uye e-Hakalau Beach Park ubuka i-Mauna Kea, izimpophoma nezitshalo eziluhlaza. Uma ufika ogwini, cishe kuyoba okwakho konke njengoba uhlola amanxiwa ensimu endala kashukela futhi ubheka ngokumangala ubuhle bemvelo baseHawaii. Uma usubuyile, ungakwazi ukugxumela echibini ukuze ubhukude okuqabulayo emzileni wamamitha angu-25 noma udlale umdlalo we-volleyball endaweni yezemidlalo yechibi. Uma usuqedile, hlala engadini engezansi ku-Hale Laule'a nencwadi enhle noma hlela iseshini ye-Yoga noma yokuzindla. Ngemuva kwesidlo sasemini, hamba ezingadini, vakashela imakethe yabalimi, noma uhlele ukwelashwa kwe-equine noma izifundo zokugibela namahhashi endawo ngqo emgwaqeni. Phakathi nezinyanga zasebusika, bukela imikhomo idlala isuka endaweni. Ebusuku, jabulela i-lanai engemuva yendlu enkulu ngaseziko, noma ungene endaweni ye-spa ubukele izinkanyezi ziqhubeka. Ukuze uthole ubumfihlo, yiya engadini engezansi futhi uhlale wedwa uzungezwe ulwandle ezinhlangothini ezintathu namagagasi ashaya emadwaleni angezansi njengoba ukhukhuleka uye kwelinye izwe kwenye yezindawo ezinhle kakhulu kulo mhlaba. Noma yini oyifunayo ingenzeka futhi izinhlelo zingenziwa nomsingathi.
Amalungiselelo omsebenzi owengeziwe angenziwa nomsingathi ukuze afake ukuqeqeshwa kwe-Scuba Dive, i-Open Water Scuba Dives, i-Snorkeling, i-Equine Therapy kanye ne-Horse Riding Lessons ngaphandle kwendawo, Ukuvakasha Kwangasese Kosuku Olugcwele Lwesiqhingi, kanye Ne-Life Coaching kusetshenziswa i-Myers Briggs Personality Type Indicator. Ngezikhathi ezikhethekile, isivakashi singahlela isevisi yangasese yangasese, amaphathi angasese, imishado neminye imicimbi ekhethekile.
Kunezilwane eziningi kule ndawo. Zonke izilwane zinobungane futhi zisezindaweni ezithile. Ngeke bazihluphe izivakashi, nakuba ungahlela ukuchitha isikhathi nazo. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nalokho okungenzeka, xhumana nomsingathi.
ISITHEMBISO SETHU KUWE
• Zonke izithombe zinembile ngo-100% futhi zithathwe ngomakhalekhukhwini, azenziwanga ngobungcweti ngamalensi e-engeli ebanzi ukuze enze okuncane kubukeke kukhulu. Zonke izithombe zisuka endaweni, hhayi izindawo ezikhangayo eziseduze.
• Lapho ufika, uzothola indawo inefenisha ephelele, ihlanzekile, futhi igcwele ishampoo, insipho, imikhiqizo yamaphepha kanye namathawula ahlanzekile, asezingeni eliphezulu namalineni.
• Izivakashi kuzodingeka zibe nokwaziswa kokwamukela ukuze zisebenzise izinsiza zendawo futhi zisayine Isivumelwano Sesikweletu. Ngaphezu kwalokho, sonke isivakashi kufanele sinikeze umazisi wesithombe okhishwe uhulumeni ukuze aqinisekise ukuhlonza nokuqonda izinqubomgomo zendlu.
• Azikho izimali ezifihliwe. Lesi sakhiwo siqoqa imali yokuhlanza engu-$75 kanye nezintela ze-GET/TAT njengoba kudingeka. Intela yasendaweni neyesifunda yegumbi ingu-14.9% ngokuhlala ngaphansi kwezinsuku eziyi-180. Umsingathi uzoqoqa intela kusivakashi ngokuhlukana lapho singena.
• Leli yifulethi elizimele elisendaweni yokusebenza engamahektha ayi-5 enezilwane. Akulona ihhotela/imotela, i-condominium, noma indawo yesikhathi. Kunemisebenzi eyenziwayo emini nasebusuku yokweseka ukuphila kwansuku zonke endaweni engaka.
• Lena indawo engenagwayi. Akukho ukubhema, ukufutha, noma ukuhlafuna ugwayi okuvunyelwe endaweni. Azikho izidakamizwa.
• Izivakashi zivuma ukuhlala ibanga eliphephile ukusuka eweni futhi zilandele yonke imithetho yendawo.
Ukulandwa okuyimfihlo ezikhumulweni zezindiza zase-Hilo nase-Kona kuyatholakala ukuze uthole imali eyengeziwe. Ncoma imoto eqashwayo ngesikhathi uhlala ukuze ubone zonke izindawo zeziqhingi.
SITHIWE ngokuhambisana ne-Hawaii County Ordinance Number 2018-114, le ndawo iyiYunithi Yokuqasha Ebanjwe. Usokhaya osendaweni ngu-Chad kanye noDkt. Jennifer Walker abahlala endaweni. Inombolo yelayisensi TA-068-185-3952-01
4.96(50 okushiwo abanye)
I-Estate of Hale Lauale'a itholakala e-Opihi Point edolobheni lase-Hakalau, amamayela angu-12 eNyakatho ye-Hilo, e-Hawaii, nge-Hamakua Cost of the Big Island. Eyaziwa ngokuthi iGolden Coast yaseHawaii, ibizwa ngokuthi indawo enhle kakhulu futhi enhle kunazo zonke eHawaii. Vakashela amadolobha amadala, izimpophoma, amabhishi angasese kanye nezindawo izivakashi eziningi eziya eHawaii azisoze zazibona. I-Hale Laule'a iyimizuzu engama-20 ukusuka e-Hilo, ihora elingu-1 ngokushayela ukuya e-Volcano National Park, ihora elingu-1.5 ukutshuza uye esiqongweni sentaba i-Mauna Kea, namahora angu-1.75 ukuya e-Kona.
Sihlala endaweni eseMain House. Kunamafulethi amabili aqashwayo endaweni, iSolar Suite kanye neCarriage House. Kukhona umphathi wempahla ngesikhathi sosuku esizeni. Ukufinyelela Kwesivakashi kutholakala Efulethini kuphela. Zonke izindawo ezingaphandle zivuliwe ngaphandle uma zimakwe ukuthi zikhawulelwe.
Sihlala endaweni eseMain House. Kunamafulethi amabili aqashwayo endaweni, iSolar Suite kanye neCarriage House. Kukhona umphathi wempahla ngesikhathi sosuku esizeni. Ukufinyelela Kw…
Inombolo yepholisi: TA-068-185-3952-01
Hlola ezinye izinketho ezise- Hakalau namaphethelo